पायल्स के हो ? यसबाट कसरी बच्ने ? अनि के के गर्नुपर्छ, सम्पूर्ण जानकारी - Hitaraj Sanjyal
Home / blog / health / पायल्स के हो ? यसबाट कसरी बच्ने ? अनि के के गर्नुपर्छ, सम्पूर्ण जानकारी
पायल्स के हो ? यसबाट कसरी बच्ने ? अनि के के गर्नुपर्छ, सम्पूर्ण जानकारी
मलद्वार र मलाशयका भित्ताहरुमा रहेको रक्तनली सुन्निने र त्यसबाट उत्पन्न हुने विभिन्न समस्या नै पायल्स हो। सुरुवाती चरणमा खानपान र जीवनशैली बदलेर यसबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ। जटिल अवस्थामा भने शल्याक्रिया गर्नुपर्ने समेत हुनसक्छ। योग, आर्युवेदलगायत परम्परागत उपचार विधीबाट पनि यसको निदान खोज्न सकिन्छ।
कति प्रकारका हुन्छन् ? यसलाई विभिन्न श्रेणीमा राखिएको छ।
शिराहरु सुन्निएर सानो डल्लो बनी मलाशयमा नै रहने तर, बाहिर नआउने।
सुन्निएका नसाहरु मल त्याग गर्दा बाहिर आउने, दिसा गरिसकेपछि पुन आफ्नै स्थानमा जाने।
शिराहरुको डल्लो बाहिर आउने र आफैं यथास्थानमा नजाने।
सुन्निएको नशाका डल्लाहरु निरन्तर मलद्वार बाहिर नै रहने।
दिसा गर्दा समस्या हुनु नै यसको खास लक्षण हो। मलाशयमा भारीपन हुने, दिसा खलास नहुने, दुख्ने जस्ता सुरुवाती लक्षण हुन्। जति जति रोग बढ्दै जान्छ, उत्तिनै दुखाई बढी हुन्छ। गुद्वारमा मासुको डल्ला निस्कने, त्यसमा चिलाउने हुन्छ।
कब्जियत नै यसको मुल कारण हो। जब कब्जियत हुन्छ, दिसा गर्दा बल पर्छ। त्यही बलले गुद्वार भित्रका रक्तशिरालाई तन्काइ दिन्छ। यो क्रमस फैलन थाल्छ र गिर्खा बन्न थाल्छ। त्यसैले यसबाट बच्नका लागि कब्जियतको समस्या आउन दिन हुँदैन। कब्जियत आउन नदिनका लागि खानपानमा सर्तकता अपनाउनु पर्छ। किनभने अपच हुने खानेकुराहरु, जस्तो कि मैदाबाट बनेका, प्याकेटमा राखिएका, तारेका, भुटेका, जंक फूड, मसलेदार, मासुजन्य खानेकुरा कब्जियतको कारण बन्छ। यस्तो अस्वस्थ्यकर खानेकुरा खाने तर, पर्याप्त पानी नपिउने, व्यायाम नगर्ने, फाइबरयुक्त खानेकुरा, फलफूल सेवन नगर्ने बानीले कब्जियत निम्त्याउँछ। कब्जियतले पायल्स। अनियमित खानपान पनि यसको कारण हुनसक्छ। जस्तो कि भोक लागेको बेला नखाने, राती अबेर खाने, आवश्यक्ताभन्दा बढी खाने बानीले कब्जियत रोग पैदा गर्छ। त्यस्तै, दिसा रोक्ने बानी अर्को कारण हो। दिसाको वेगलाई रोक्ने बानीले कब्जियतको समस्या ल्याउँछ। गहु्रंगो भारी उचाल्ने, पेटको समस्या भएका, गर्भवती र गर्भपात गर्नेहरु, मोटोपन भएका, गुदा मैथुन गर्नेहरुमा यो समस्या देखापर्न सक्छ।
सुरुमा त रोग लाग्न नदिनु नै उत्तम हो, जसका लागि खानपान र जीवनशैली बदल्नुपर्छ। स्वस्थ्य खानपान र जीवनशैलीले यस्तो समस्या आउँदैन। पायल्सको समस्या छ भने चाहि त्यसको प्रकृति अर्थात श्रेणी अनुसार उपचार विधी अपनाउनु पर्छ। सामन्य स्थितीमा खानपान, जीवनशैली, व्यायाम आदिबाट यसको निदान खोज्न सकिन्छ। योग, आर्युवेद, प्राकृतिक चिकित्सा आदिबाट पनि पायल्सको निदान खोज्न सकिन्छ। पेटको सरसफाईमा ध्यान दिने, रेसायुक्त वा फाइबरयुक्त खानेकुरा खाने, पर्याप्त पानी खाने, स्वस्थ्य भोजन तालिका अपनाउने, व्यायाम गर्ने जस्ता बानीले पायल्सबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ।
यस्तो खानेकुरा सेवन नगर्ने जसले पेटलाई भद्दा बनाउँछ। पाचन यन्त्रमा समस्या ल्याउँछ। जस्तो कि, बोसोयुक्त, तारेको, भुटेको, मसलेदार, मासुजन्य, दुधजन्य, मैदाबाट बनेका, कार्बोनेटेड डिं्रक आदिको सेवन नगर्नु हुँदैन। मदिरापान, धुमपानले पनि यसलाई जटिल बनाउँन सक्छ। सकेसम्म अन्न नखाएकै राम्रो हुन्छ।
सुपाच्य खानेकुरा सेवन गर्ने। फाइबरयुक्त खानेकुरा जस्तो कि, हरियो सागपात, सलाद आदि पर्याप्त मात्रामा लिने। ताजा फलफूलको सेवन गर्ने। पर्याप्त पानी पिउने। दाल पिउने। मकै, गहुँ, फापरको रोटी आदि उपयोगी हुन्छ।
नियमित रुपमा शौच क्रिया गर्ने बानी बसाल्नु पर्छ। दिसा गर्दा बल गर्नु हुँदैन।
यसबाट छुटकारा पाउनका लागि उपवास राम्रो विधी हो। सातामा कम्तिमा एक दिन उपवास बस्नु पर्छ।
रक्तश्राव भएको छ भने मलद्वारमा बरफले मालिस गर्दा ठीक हुन्छ।
रक्तश्राव नभएको अवस्थामा भने तातो पानीमा मलद्वार डुबाएर बस्नुपर्छ। सहन सक्ने तातो पानीमा १५, २० मिनेट जति बस्नुपर्छ।
दिसा गरिसकेपछि राम्ररी धोई तातोपानीले सेक्ने गर्नुपर्छ।
मिठो मसिनो भन्दा खस्रो-मोटो खानेकुरा सेवन गरौं। रेसा र चोकरयुक्त खाद्यपदार्थ उपयोगी हुन्छ।
पायल्सको समस्या घरेलु विधीबाट पनि हटाउन सकिन्छ। यसका लागि खानपानमा विशेष सतर्कता अपनाउनु पर्ने हुन्छ। पायल्समा के खाने, के नखाने भन्ने कुराले ठूलो अर्थ राख्छ। जथाभावी खाने, जस्तोसुकै खाने बानीले पायल्सको संभावना बढाउँछ। गलत खानपान, पुग्दो पानी नपिउने जस्ता बानीले कब्जियत हुन्छ। यस्तो अवस्थामा दिसा गर्दा बल गर्नुपर्ने हुन्छ। पछि त्यसैले पायल्सको संभावना बढाउँछ।
पायल्सको रोगीले कब्जियत हुन नदिन फाइबरयुक्त, झोलिलो खानेकुरा खानुपर्छ।
तारेको, भुटेको, मसलेदार खानेकुराले समस्या निम्त्याउँछ।
पायल्स रोगीको लागि मुलाको रस निकै उपयोगी हुन्छ।
कागती पानीको सेवनले पायल्समा राहात दिन्छ।
पायल्सको कारण मलद्वारमा दुख्ने, पोल्ने हुन्छ। उक्त ठाउँमा हल्कासँगले घिउकुमारीको गुदी लगाउनु पर्छ। यसले दुखाई कम गर्नका साथै औषधीको पनि काम गर्छ।
बदामको तेल पनि पायल्समा निकै उपयोगी हुन्छ। एक दिनमा तीन चार पटक मलद्वारमा वदामको शुद्ध तेल लगाउनुपर्छ।